မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: Flatmates (သို့) စင်္ကာပူရောက်အလွဲများ အပိုင်း ၁၅
Flatmates (သို့) စင်္ကာပူရောက်အလွဲများ အပိုင်း ၁၅
ဒီအကြောင်းကို ပြောပြချင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီထဲမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်နေတဲ့သူတွေကြောင့် ရေးသင့်မရေးသင့်စဉ်းစားရင်း မရေးဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ခုတော့ ၁၀စုနှစ်တစ်ခုကျော်တောင် ခြားသွားပြီး ပါဝင်ပတ်သတ်နေသူ အတော်များများတောင် စင်္ကာပူမှာ မရှိကြတော့ဘူးဆိုတော့ တချိန်က စိတ်ရှုပ်ရတာတွေဟာ ဒီအချိန်မှာ ဟာသတွေအဖြစ်နဲ့ ပြန်ပြောမိတာကို မတော်တဆ ဒီဘလော့ကို လာဖတ်မိရင်တောင် စိတ်မဆိုးကြလောက်ဖူးလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သူတွေဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာထက် ဒီအဖြစ်အပျက်လေးက ဘယ်လိုဆိုတာကိုသာ စာဖတ်သူတွေကလဲ စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။
လူဆိုတာက အသက်တစ်ရာ မနေရ အမှုတစ်ရာ ပွေရဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲ လူပေါင်းစုံနဲ့ ဘဝမှာ တွေ့ခဲ့ကြမှာပါ။ ကိုယ်ကြုံတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေကို အပြင်ဘန်းကလွဲလို့ သူ့ကိုတော့ ငါသိပါတယ်လို့ သေချာပေါက်ပြောရဲလား? ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်သိထား ထင်ထားတာနဲ့ တခြားစီဖြစ်နေတတ်လို့ပဲ။
စင်္ကာပူကို ကျောင်းစတက်ဖို့လာကြရင် များသောအားဖြင့်တော့ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ အိမ်ငှားပြီးစုနေကြတာပါပဲ။ အားလုံးသိကြတဲ့ လူတစ်ကိုယ် စရိုက်တမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ဘယ်တူနိုင်ပါ့မလဲ။ အဲ့ဒိအိမ်မှာ နေတဲ့လူတွေအကြောင်းပြောရရင်လဲ ရီစရာပါ။
တစ်ယောက်က အကြွားသန်တယ် သူ့ကိုယ်သူ မင်းမျိုးမင်းနွယ်လို့ထင်ရလောက်အောင် စကားပြောတတ်တယ်။ သူလုပ်တာမှ အကောင်း သူလုပ်တာကလွဲ ကျန်တဲ့သူလုပ်တာဆို မကောင်းဘူး။ လူတိုင်းအနည်းနဲ့အများ အဲ့လိုပဲ ဆိုပေမဲ့ သူက အသေးအဖွဲကအစ ဥပမာ၊ သူက မျက်ခုံးမွှေးရိပ်လေ့မရှိဘူး၊ အာ့ဆို မျက်ခုံးမွှေးရိပ်တဲ့ တခြားမိန်းကလေးတွေက မျက်ခုံးမွှေးမရိပ်ပဲ မျက်ခုံးမွှေးကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေလောက် မမြင့်မြတ်ဘူး စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ (ခုတော့ သူ အမြင်ကျယ် လောက်ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်က သူ့ကို လမ်းမှာ တွေ့လိုက်တာ မျက်ခုံးမွှေးရိပ်ထားလေရဲ့။) ဒါပေမဲ့ သူ့ဆီလာလည်တဲ့ သူ့ဘဲကြီးကကျ ငတ်တီးတအားထချက်။ သူက အချက်အပြုတ်ကောင်းတယ် ဉာဏ်သိပ်မကောင်ဘူး၊ သူ့ဘဲက စာတော်တယ် ငတ်တီးထတယ်။ လိုက်လဲလိုက်တယ်ဟုတ်? သူ့ဘဲအိမ်လာလည်ရင် သူ့ခမျာ နောက်ဖေးက မထွက်တန်းကို ချက်ပြုတ်ရတာပါ။ ဒါတောင် သူချက်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်အတွင်း ကျွန်မတို့တွေ ချက်ထားတာကို “ဘာတွေချက်စားလဲဟေ?”ဆိုပြီး ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ အမြဲတောင်းစားတတ်သေးတာ။ တစ်ခါကဆို ကျွန်မအခန်းဖော် အစ်မကြီးချက်ထားတဲ့တစ်ယောက်စာဟင်းလေးကို နည်းနည်းဆိုပြီးတောင်းစားရင်း ကုန်ခါနီးဖြစ်တော့မှ “ဟယ်တော့… ငါစားလိုက်တာ လက်လွန်သွားတယ်”ဆိုပြီး စပ်ဖြီးဖြီးပြောမှတော့ ဟိုအစ်မကြီးလဲ အောင့်သက်သက်နဲ့ “ရပါတယ်” ဆိုပြီး မချိပြုံးနေရတော့တာပေါ့။ အဲ့ဒိကတည်းက သူလာပြီဆိုရင် ကိုယ်မကျွေးချင်ရင် သူမမြင်အောင်ထားရင်ထား၊ မဟုတ်ရင်လဲ ကိုယ်သာ အမြန်စားဖို့ပဲ ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံး Heads up လုပ်ထားရတယ်။ သူ့ဆော် ကောင်မလေးကတော့ သူကြွားခဲ့သမျှ သူ့ဘဲလာရင် အရှက်ကိုကွဲရောပဲ။
နောက်ထပ် ရှမ်းတရုတ်မတစ်ယောက်ကျတော့ သိပ်တော့ ဟင်းချက်စားလေးတော့မရှိပါဘူး။ အပြင်သွားရင်တော့ ရေမွှေးတစ်ပုလင်းလုံးမှောက်သလား လိုးရှင်း တစ်ဗူးလုံးပဲ သုံးသလားထင်ရလောက်အောင် မွှေးကြိုင်နေတတ်ပါတယ်။ ဟင်းချက်လေ့ရှိရှိ မရှိရှိ၊ လူဆိုတာ အမှိုက်တော့ ရှိတာပါပဲ။ ဥပမာ ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားတာတို့ဘာတို့ပေါ့။ အရင်က အားလုံးဘုံပစ်တဲ့ အမှိုက်ပုံးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့အမှိုက်ပုံးကိုပစ်ဖို့ကျ ဘယ်သူမှ မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ အိမ်မှာ ဟင်းအများဆုံးချက်တဲ့ ကျွန်မတို့ အခန်းက ပစ်ရတာ များပါတယ်။ အဲ့လို ပစ်ပေးနေလေ ထန်းတက်လက်မှတ်ရပြီး အမှိုက်ပုံးပစ်တာပဲ ကိုယ့်တာဝန်လိုဖြစ်လာတော့ ကျွန်မတို့ အခန်းကလူတွေကလဲ အဲ့အမှိုက်ပုံးထဲ မထည့်တော့ပဲ ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ်ချက်ချင်းပစ်ပြီး အမှိုက်ပုံးနဲ့ ဝေးဝေးနေလိုက်ပါတယ်။ အမှန်ဆို အမှိုက်များတဲ့သူက ၅ခါအမှိုက်ပုံးရှင်းပေးရင် အမှိုက်နည်းသူက တစ်ခါလောက်တော့ အလိုက်တသိရှင်းပေါ့။ တူတူနေနေတာ မိသားစုမှ မဟုတ်တာပဲ။ အားလုံး မြန်မာပြည်မှာဆို ကိုယ်လုပ်စရာမလိုခဲ့တဲ့ သူတွေချည်းပဲလေ။ ကျွန်မတို့ ညီအစ်မကတော့ ကိုယ်ဟင်းချက်တဲ့အချိန် အမှိုက်ကို ကျွတ်ကျွတ်အိပ်နဲ့ တခါတည်းထည့်ပြီး ဟိုးအမှိုက်ပိုက်လိုင်းထဲကို တစ်ခါတည်း ပစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားအစ်မကြီးတွေကတော့ ကိုယ်ပိုင် အမှိုက်ပုံးလေး သပ်သပ်ဝယ်ထားတာရှိပါတယ်။ အဲ့လိုလဲဖြစ်ရော အိမ်မှာ ခေါက်ဆွဲပြုတ်တွေ၊ သားရေစာတွေ အများဆုံးစားတဲ့ ရှမ်းတရုတ်မ အကျပ်ရိုက်ရပြီပေါ့။ သူ့အမှိုက်က ကျွန်မတို့ဟင်းချက်တဲ့သူတွေလို သိပ်မများတော့ အမြဲတမ်း သူလုပ်စရာမလိုဘူးဆိုပြီး အမှိုက်ပုံးမပစ်တာ။ ခုတော့ သူ့အမှိုက်လဲ ပစ်ပေးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးလေ။ အဲ့ကျတော့ လူလစ်ရင် လစ်သလို သူ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်အထုတ်တွေ ဘီစကွပ်ထုတ်တွေကို သူများအမှိုက်ပုံးထဲ လိုက်ထည့်ပါတော့တယ်။ အဲ့တုန်းက ဆိုရင် ကိစ္စလေးက သေးပေမဲ့ များလာတော့ အဆိုင်အခဲက နောက်ပိုင်းအတော်ကြီးလာပါတယ်။ နင့်အမှိုက် ငါ့ထဲလာမထည့်နဲ့ ပြောရင်လဲ ပြောတဲ့သူက အလွန်၊ ဒါပေမဲ့ Principle အရတော့လဲ အဲ့မိန်းကလေးက နားလည်မှုမရှိတာပါပဲ။ အဲ့တုန်းကဆို ကိုယ့်အမှိုက်ပုံးထဲ ရောက်နေတဲ့ အမှိုက်ကို ဘယ်သူ့အမှိုက်လဲ analyze လုပ်ကြ၊ အမှိုက်ပစ်သခိုးစောင့်ဖမ်းကြ၊ အမှိုက်ပုံးကို မီးခံသတ္တာလို လက်ဗွေနဲ့မှ ဖွင့်လို့ရတာတို့၊ သော့ခတ်ထားလို့ရတာတို့၊ ကိုယ့်အသံနဲ့မှ ဖွင့်လို့ရတာတို့ ဝယ်ရမဲ့ပုံပဲဆိုပြီး ကျန်တဲ့သူတွေ စောင်းမြောင်းပြောကြနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ရင်တောင် Rating ကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ ခုချိန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ရီချင်စရာ။
My Biggest Culture Shock
အဲ့ဒိ ရှမ်းတရုတ်မနဲ့ တစ်ခန်းထဲနေတဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ်မတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူကတော့ လုံးဝ ထမင်းဟင်းချက်မစားပါဘူး။ သူ့ဟာသူလဲနေတတ်ပါတယ်။ မြန်မာတွေနဲ့နေတော့ မြန်မာအစားအစာတော့ အတော်ကြိုက်တယ်။ အဲ့ဒိတုန်းက ကျွန်မတို့ကျောင်း ကန်တီးက မြန်မာထမင်းဆိုင်ရှိတော့ သူက မုန့်ဟင်းခါးတို့ ကြာဇံချက်တို့ အဲ့ဒိက ဝယ်စားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အိမ်မှာ ကိုယ်ချက်စားရင်တော့ သူ့ကို အားလုံးက ကျွေးဖြစ်ပါတယ်။ ကြာဇံချက်တော့ သူအတော်လေးကြိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ပေးပြီးတောင် ချက်ခိုင်းတယ်။ လဘက်သုတ်ဆိုလဲ ကိုယ်စားသလို စားနိုင်တယ်။ မကျွေးရင်တော့ မစားပါဘူး။ အလိုက်သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်မဆိုတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် နည်းနည်း အနေထိုင် ပက်စက်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ တစ်ရက် အိမ်က ဧည့်ခန်းထဲမှာ တီဗွီကြည့်နေတုန်း နောက်ဖေးကနေ ဖြူဖြူကြီး လမ်းလျှောက်လာတာ မျက်လုံးထောင့်ကနေ ဖြတ်ကနည်းတွေ့လို့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ မကြည့်ရဲကြည့်ရဲကြည့်လိုက်တော့မှ ရေချိုးခန်းထဲကနေ ကိုယ်လုံးတီး ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့ ထွက်လာတာ၊ ကိုယ်ကလဲ လန့်လဲ လန့် သူ့ကိုမြင်တော့လဲ သူ့အစားကိုယ်ကရှက်။ ဒါတောင် သူက ရီကျဲကျဲနဲ့ ရှင်းပြသေးတယ်။ သူ တာဝါယူဖို့ မေ့ကျန်ခဲ့လို့တဲ့။ ကိုယ်တွေသာဆို ဝင်သွားတဲ့ အင်္ကျီနဲ့ ပြန်ဝတ်ထွက်လာမှာပေါ့။ မြန်မာပြည်က ရောက်စ ကျွန်မအတွက်တော့ Culture Shock ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လဲ ခုတော့ ကိုရီးယား ဆောင်နာတွေဘာတွေသွား၊ သူတို့ တရုတ်ပြည်မှာ အိမ်သာက တံခါးတောင် မရှိဘူးကြားမိတော့ သူ့အနေနဲ့ မိန်းကလေးတွေချည်းပဲ ဆိုပြီး သိပ်ဂရုမစိုက်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်အစ်မကြီးတစ်ယောက်ကျတော့ ကိုယ်တွေနဲ့ အတော်လေးကို ခင်ပါတယ်။ တစ်ခန်းထဲနေတာပေါ့။ သူ့ချစ်သူက အမေရိကားမှာဆိုတော့ သူက ၂၄နာရီနီးပါ ဖုန်းပြောတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၃နှစ်လောက်က ဟန်းဖုန်းတွေက နည်းနည်း ဈေးကြီးသေးတော့ လိုင်းဖုန်းသုံးပြီး ဖုန်းကဒ်ဝယ်ပြောတာပေါ့နော်။ စင်္ကာပူနဲ့ အမေရိကားကျတော့ ဖုန်းကဒ်တစ်ကဒ်က ၃၊ ၄နာရီအပြောခံတယ်လေ။ ဟိုဘက်က ခေါ်တာတော့ များပါတယ်။ အဲ့ဒိတုန်းက မြန်မာပြည်ခေါ်ရင် ၁၀ဒေါ်လာကဒ်က ၈မိနစ် ကနေ ၁၀မိနစ်လောက်ပဲရတာ။ ဒီကြားထဲ လူကြီးမင်းနဲ့တွေ့ရင် ပိုက်ဆံက ဖြတ်ခံရသေးတယ်။ သူ့လိုင်းဖုန်းကြိုးကြီးက အရှည်ကြီးပဲ တစ်အိမ်လုံးသွားလေရာ ယူသွားလို့ရအောင်လေ။ တစ်ချိန်လုံး ဖုန်းပြောနေတဲ့သူဆိုတော့လဲ တစ်နေရာတည်းဘာမှ မလုပ်ပဲ နေလို့မရဘူးလေ။ အဲပြောချင်တာက သူဖုန်းပြောတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။
သူက သူ့ရည်းစားကို အရမ်းချစ်တာ။ ဒိအထိလဲ နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ လူတိုင်းကိုယ့်ရည်းစားကို ချစ်ကြပါတယ်။ သူစကားပြောရင် “ကို ကလေ…” လို့ အစချီပြီး သူ့ရည်းစားအကြောင်းမပါတာ မရှိဘူး။ ဘယ်အကြောင်းအရာပြောနေနေ “ကို ကလေ…” ဆိုပြီး ဆက်စပ် ပလိုက်တာပါပဲ။ နည်းနည်းလေး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေမဲ့ ခင်မင်မှုရှိနေတော့ သူ့အကျင့်လေးကို လက်ခံပြီး နားလည်ပေးပါတယ်။ အဲ! ဆိုးတာက… တီဗွီကြည့်တဲ့အချိန်… ကျွန်မက ကျွန်မကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် ကျွန်မကို လာနှောင့်ယှက်တာ စကားလာပြောတာ သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ရန်ကုန်အိမ်မှာတောင် တီဗွီစောင့်နတ်မင်းလို့ အမည်ရခဲ့တာနဲ့ အတူ စင်္ကာပူရောက်တော့လဲ တီဗွီရှေ့မှာ များသောအားဖြင့် ကျွန်မရှိတာများပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲက ည ၈နာရီပြမယ်ဆိုရင် အများနဲ့ နေတော့ ဦးသူစနစ်လေ။ ဦးတဲ့သူကြည့်နေတဲ့ Channel ကို လိုက်ကြည့်ရတာပါ။ မပြောင်းကြပါဘူး။ (ကိုယ့်က အိမ်ကသူတွေနဲ့ ဘာရှော့မှ မရှိခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုလဲ အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာနာမည်ပေးထားကြမလဲတော့ မသိပါ။ ပေးထားလဲ စိတ်မဆိုးပါဘူး။ :P ကိုယ်တွေ တီဗွီကြည့်တာ စာမေးပွဲတွင်း တစ်အိမ်လုံး ဖင်ကုန်း စာကျက်နေချိန်တောင် တီဗွီရှေ့ စာအုပ်လေးနဲ့ ထိုင်နေတတ်လို့ အတူနေတဲ့ တစ်အိမ်လုံးက လူတွေက ကိုယ့်ကို စာမေးပွဲပြီးသွားပြီလားလို့ မေးခံရတဲ့အထိ)
အဲ အစောက ကိစ္စဆက်ရရင်ဖြင့် အဲလို ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို တလေးတစားနဲ့ အာရုံစိုက်ကြည့်၊ ဖီးလ်အပြည့်နဲ့ကြည့်တဲ့ကျွန်မဘေးကို အဲ့ဒိ အစ်မကြီးရောက်လာပြီဆိုရင် ပြဿနာက စတာပဲ။ သူက သူ့ရဲ့ “ကို” အကြောင်းစတော့တာပဲ။ သူ့ကို လှည့်ကြည့် ရီပြမိလို့ “ကို ကလေ…” ဆိုပြီး စမှာစိုးလို့ ရုပ်ရှင်ထဲ အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင်တောင် ရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသားက မင်းသမီးကို ဂရုစိုက်တဲ့အခန်း၊ ချစ်ပြတဲ့အခန်း၊ ဂျေဝင်တဲ့အခန်း (ပုံမှန်အားဖြင့် ပရိတ်သတ်တွေ ရင်ခုန်တဲ့ အခန်းလေးတွေပေါ့) မျိုးတွေလာပြီဆိုရင်
“ဟယ်… ကို လဲ အဲ့အတိုင်းပဲသိလား။ အစ်မကို သိပ် ချစ်တာ”။
“ဟယ်… ကို ကလေ… အဲ့မင်းသားလိုပဲ သဝန်တိုတတ်တယ်သိလား။”
“ဟယ်… မင်းသား သနားပါတယ်။ ကို့ ကိုတော့ အစ်မက အဲ့လို မလုပ်ရက်ပါဘူး” ပြီးကျရင် ဘေးမှာ တရွှတ်ရွှတ် ငိုသေးတာ။
ကိုယ်လဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ စိတ်ပါဝင်စားလာရင် ငိုတတ်ပါတယ်။ လူတွေရှေ့ဆိုရင်တော့ မငိုပဲ ထိန်းထားတာပေါ့။ အခုတော့ ရင်ခုန်ရမဲ့ အခန်းတွေ လာရင်တောင် “ကို ကလေ…” ဆိုတဲ့ အသံကြီးလာမှာကို ထိတ်လန့်စွာ စောင့်စားနေရတဲ့ ဘဝ၊ မင်းသားလေးကို သနားလို့ ငိုချင်နေရင်တောင် “ကို ကလေ…” ဆိုပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း ကိုယ့်ဘေး တရွှတ်ရွှတ်လာငိုနေတော့ ကိုယ့်ဖီးလ်တွေပါငုတ်ရောပေါ့။
တစ်နေ့ တီဗွီကနေ King Kong (မျောက်ဝံ)ကြီး ကားပြနေတာ အားလုံးထိုင်ကြည့်နေကြတာပေါ့။ အဲ့ထဲမှာ မျောက်ဝံမကြီးကို ကျည်ဆံထိသွားတော့ မျောက်ဝံထီးကြီးက အသည်းတွေကွဲပြီး တိရိစ္ဆာန်ပင်ဖြစ်လင့်ကစား မျောက်ဝံမကြီးဘေး အသာထိုင်ဖက်ပြီး ဝမ်းနည်းနေတာပေါ့။ အဲ့ အစ်မကြီးကလဲ ထုံးစံအတိုင်းမျက်ရည် တရွှဲရွှဲပေါ့ ဒါပေမဲ့ လူမဟုတ်ပဲ မျောက်ဝံမည်းမည်းကြီးတွေဆိုတော့ “ကို နဲ့ အစ်မ အတိုင်းပဲ”လို့ ထွက်မလာဘူး။ အဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို ဘယ်တုန်းကတည်းက အမြင်ကပ်နေမှန်းမသိတဲ့ တခြား အစ်မကြီးတစ်ယောက်က
“ဟယ်… မျောက်ဝံကြီးသူ့ ရည်းစားကို ချစ်တာ ငါနဲ့ ငါရည်းစားအတိုင်းပဲ”
ဆိုပြီး ရွှဲ့ပြောလိုက်တော့ အားလုံး ဘာကိုဆိုလိုလဲ သိပြီး ထရီကြပါလေရော။ မျက်ရည်ရွှဲလဲနဲ့ အစ်မကြီးကတော့ သူ့အကျင့်ကို သူသိလို့ပဲ ရှက်ပြီး လိုက်ရီသလား။ သူများပြောတာကို ပေါက်တတ်ကရဆိုပြီး ရီစရာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပဲ နားလည်လို့ လိုက်ရီသလားဆိုတာတော့ သူပဲ သိမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မ မဟုတ်သော ကျွန်မ
ဒီလိုနဲ့ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ နေလာပြီး အိမ်ပြောင်းသွားကြ နောက်ထပ် အခန်းငှားမဲ့သူအသစ်ရောက်လာလိုက်နဲ့ တွေ့ဆုံကြုံကွဲ ဓမ္မတာပါပဲ။ အသစ်ပြောင်းလာတဲ့ တစ်ခန်းမှာ ရန်ကုန်တုန်းက မော်ဒယ်လုပ်ဖူးပြီး ခု စလုံးရောက်တော့လဲ အချောအလှ သတင်းကြီးတဲ့ မော်ဒယ်မလေးတစ်ယောက်ရယ် နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကျောင်းပြီးခါနီး စီနီယာတစ်ယောက်ရယ် တစ်ခန်းတူတူနေပါတယ်။ မော်ဒယ်မလေးကတော့ သူ့ဟာသူ အေးဆေးပါပဲ ဘယ်သူနဲ့မှလဲ ပြဿနာမဖြစ်ဘူး။ သူ့အခန်းဖော် စီနီယာဆီကို အမြဲလာလည်တဲ့ သူငယ်ချင်း ဂျိုဂျို (နာမည်အရင်းမဟုတ်) ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အဲ့ကောင်မလေးလာရင် သူကလဲ အခန်းထဲဝင်တော့ မော်ဒယ်မလေးလဲ စိတ်ရှုပ်လို့ထင်တယ် အပြင်ထွက်ထွက်သွားတယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ တစ်ခန်းထဲ မဟုတ်တော့ ဘာမှ သိပ်မထိခိုက်ဘူးလေ။ အဲ့ဒိ ဂျိုဂျိုးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက ခေတ်ဆန်ဆန်ပိန်ပိန်ပါးပါးလေး။ သူဝတ်တဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေဆို Floral အဆင်လေးတွေ ဇာလေးတွေနဲ့ အရမ်းလှတာပဲ။ အိမ်ရှေ့ဖိနပ်ချွတ်မှာ ဒေါက်ဖိနပ်အမြင့်ကြီး ချွတ်ထားတာတွေ့ရင် သူအိမ်ကိုအလည်ရောက်နေလို့ပဲ။ အမြဲလာလည်နေကျဆိုတော့ အိမ်က လူတွေအားလုံးနဲ့လဲ ရင်းနှီးပါတယ်။ သူကလဲ ခင်ခင်မင်မင်ရှိပါတယ်။
တစ်ရက် အိမ်မှာ တခြားလူတွေသိပ်မရှိကြဘူး။ အိမ်က စံပြချစ်သူအစ်မကြီးက ထုံးစံအတိုင်း ဖုန်းပြောရင်း အခန်းထဲကထွက်...နောက်ဖေးကို ချိုးအကွေ့၊ သူကလဲလက်ထဲမှာ ပန်းကန်ကိုင်ထားပြီး ဖုန်းကိုပုခုံးနဲ့ ညှပ်ပြောကြည်နူးနေတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ပဲ မျက်လုံးက အရင်ရောက်တာပေါ့။ မီးဖိုရှေ့မှာ ခြေသလုံးမွှေးတွေနဲ့ ယောက်ျားခြေထောက်ကြီးကို စတွေ့တာပေါ့။ သူလဲ အလန့်ထညက်နဲ့ ခြေထောက်ကနေ တဖြည်းဖြည်း မော့ကြည့်တော့မှ ဂျိုဂျိုဖြစ်နေတယ်။ ခါတိုင်းဆို သူက အိမ်လာရင် အသာကပ်ခြေအိပ်ရှည်အမြဲဝတ်ထားတော့ သတိသိပ်မထားမိဘူးလေ။ အဲ့နေ့ကတော့ သူလဲ အိမ်မှာ လူမရှိဘူးဆိုပြီး နောက်ဖေးဝင် ဟင်းချက်နေတော့ ခြေအိတ်ချွတ်ထားလိုက်ပုံရတယ်။ စံပြချစ်သူအစ်မကြီးကလဲ အသည်းခတ်ငယ်ငယ်ဆိုတော့ စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေ့တာကျနေတာပဲ သူ့ရှေ့တော့ ဟန်မပျက် ပြန်လှည့်လာပြီး အခန်းထဲဝင်လာတော့မှ
“အမလေး… ဂျိုဂျိုက အခြောက်ကြီးလားမသိဘူး” ဆိုပြီး စပြောပါတော့တယ်။ ကိုယ်တွေလဲ အမြဲ မိန်းမလို့ သတ်မှတ်ပြောဆိုနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ဘယ်လက်ခံနိုင်မလဲ။ သူက ယောက်ျားဆိုရင်တော့ လူကောင်သေးတဲ့အထဲ ပါမယ်။ အသံက မိန်းမအသံလို မညောင်ပေမဲ့ တချို့ သူ့ထက် အသံသြတဲ့ မိန်းမတွေတောင် ကိုယ်တွေ့ဖူးတော့ သူလဲ အသံသြတဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်မယ်ပဲ ယူဆထားတာ။ ပြီးတော့ အခြောက်တွေနဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ စကားပြောပုံကလဲ မတူပါဘူး။ အခြောက်တွေက တကယ့်မိန်းမတွေထက် ပိုနွဲ့နေတတ်တယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ဂျိုဂျိုးကတော့ ကျွန်မတို့မိန်းမတွေလိုပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စကားပြောလဲ “နင်ဟယ်… ငါဟယ်” နဲ့ အပိုတွေ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ အခန်းဖော်တွေကြားလဲ ဟုတ်လားမသိဘူး။ မဟုတ်ပဲနဲ့ပဲ စွပ်စွဲမိတာလား။ ခြေသလုံးမွှေးရှည်တဲ့ မိန်းကလေး လဲရှိနိုင်တာပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ စံပြချစ်သူမမကတော့ သူ့ခြေသလုံးမွှေးက မိန်းကလေး အမွှေးနဲ့ကို မတူဘူးတဲ့။ သူကတော့ သေချာတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်မို့ တစ်ခန်းထဲနေတဲ့ မော်ဒယ်မလေးက ရိပ်မိလို့ သူလာရင် အပြင်ထွက်ထွက်သွားတာကိုးလို့ တွေးမိကြတာပေါ့။
အဲ့ဒိအကြောင်းကို ကျွန်မအစ်မတွေနဲ့ ခင်တဲ့ မအေး ဆိုတဲ့ အစ်မကြီးကိုပြောပြတော့မှ “ဂျိုဂျိုးကို သိတာပေါ့။ သူ့အိမ်မှာ သူနဲ့ တစ်ခန်းထဲ နေသွားတာတောင် အခြောက်မှန်း တော်တော်နဲ့ မသိခဲ့ဖူး”တဲ့။ သူက အရမ်းသိုသိပ်တာတဲ့။ အင်္ကျီလဲရင်တောင် တစ်ခန်းထဲပေမဲ့ အိမ်သာထဲ ဝင်လဲလို့ အားလုံးက သိုသိပ်တဲ့ မိန်းကလေးပဲထင်တာ။ ကျောင်းမှာ “မအေး က ယောက်ျားနဲ့ အခန်းရှယ်နေတာဆိုပြီး သတင်းတွေထွက်တော့ သူက ငါယောက်ျားနဲ့ အခန်းမရှယ်ပါဘူး။ အိမ်တော့ရှယ်နေတယ်။ သူက အိမ်သူကြီးဆိုတော့ အိမ်က အိပ်ခန်းတစ်ခုမှာတော့ ယောက်ျားလေး ၂ယောက်နေတယ်။ ဒါကလဲ စင်္ကာပူမှာ ပုံမှန်လိုဖြစ်နေတာပဲလေ။ သူ့ကို ယောက်ျားနဲ့ တစ်ခန်းထဲ အိပ်တာဆိုတဲ့ သတင်းကြီးကြောင့် တစ်ရက် သူ့အသိကောင်လေးကို အတင်းပြောပြဆိုပြီးမေးတော့မှ ဂျိုဂျိုးက ယောက်ျားတဲ့။ သူကျောင်းကို ပထမဆုံးလာတက်တုန်းကတောင် ယောက်ျားလေးလို ဝတ်သေးတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ခပ်နွဲ့နွဲ့ပဲပေါ့နော်။ ခုတော့ ကျောင်းတက်မမှန်လို့ ကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပြီး လူကလဲ လုံးဝ မိန်းမလိုဖြစ်သွားတာတဲ့။ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် သူ့မိဘတွေ သိမှာစိုးလို့ ဒီမှာ မိန်းမလို နေရတာ ပျော်တယ်ဆိုပြီး နေနေတာတဲ့။ သူ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ ပိုက်ဆံစုပြီး ဖြတ်ဖောက်ချုပ်လုပ်မယ်ပေါ့။ အဲ့တော့မှ သူလဲ အားတော့နာတယ် ဒါပေမဲ့ တစ်ခန်းတည်းနေရတာတော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးလေ။ ဒီတော့ အခြောက်လဲ ယောက်ျားပဲဆိုပြီး ဘေးက ယောက်ျားလေး ၂ယောက်ခန်းမှာ သွားအိပ်ဆိုပြီး ပို့လိုက်တော့။ ဟိုဘေးက ယောက်ျား ၂ယောက်လဲ စကပ်တွေ အတွင်းခံတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ် အခန်းရှယ်မတုန်း။ အဖြစ်ကိုတွေးပြီး ရီလဲရီရသလို ကာယကံရှင် ဂျိုဂျိုးကိုလဲ ဂရုဏာသက်မိပါတယ်။
ကိုယ်တွေလဲ စစချင်း သိသိချင်းတော့ နည်းနည်းဟန့်သွားပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ သူ့ဟာသူ ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ပုံမှန်ပေါ့။ အိမ်မှာ တခြားလူတွေရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဘဲတွေ ယောက်ျားလေးတွေ လာလည်နေရင်တောင် ပုံမှန်နေနိုင်တာ။ သူ့ကိုလဲ နောက်ပိုင်းတော့ ပုံမှန်ပဲ အားလုံးက ဆက်ဆံဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် စင်္ကာပူရောက်တုန်း လွဲလိုက်တဲ့ အလွဲတွေကတော့ ကျွန်မ မဟုတ်သော ကျွန်မတွေနဲ့လဲ ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တာပါပဲ။
ဒီပိုစ်လေးနဲ့အတူ စကားလေးပါးချင်တာက တစိမ်းတွေနဲ့ နေတာ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့နေတာနဲ့ မတူတဲ့အတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အလိုက်အထိုက် ညှိနေနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ မိသားစုချင်းတောင် အမှတ်မထားကြပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စကားများတတ်သေးတာ။ တစိမ်းနဲ့ စကားများရင်တော့ ပြန်ခေါ်ဖို့ခက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကိုလာပြီး ကျောင်းတက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အများစုကတော့ အလွယ်တကူ စခဲ့ကြ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ်က အိမ်ငှား၊ အခန်းငှားဆိုရင် အလိုက်သိပေး၊ အိမ်မှာရှိတဲ့ စည်းကမ်းတွေ အိမ်ပေါ်မတက်ခင်ကတည်းကမေးပြီး လိုက်နာနိုင်မှ အဲ့အိမ်မှာနေ၊ ကိုယ်က အိမ်ရှင်၊ အိမ်သူကြီး ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်အိမ်မှာ လာငှားနေတဲ့သူဆိုတာ ကိုယ့် ကာစတန်မာပဲ သူတို့ကိုလဲ အထိုက်အလျောက် နားလည်ပေး၊ အိမ်မှာ အခန်းငှားနေတာ ကိုယ့်လုပ်စာလာထိုင်စားနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ သူ့တို့ကိုလဲ သူတို့ရသင့်တဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပေး။ တချို့ မျက်စိမှိတ်ပေးလို့ရတဲ့ အမှားလေးတွေရှိခဲ့ရင်တောင် ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်။ နောက်မလုပ်စေချင်ရင် သတိပေးလိုက်။ သူတို့ဆီက ကိုယ်ပိုက်ဆံရနေတာပဲလေ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တစိမ်းနဲ့ မနေနိုင်ရင် ကိုယ်လဲ ပိုက်ဆံရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ အပြန်အလှန် သိတတ်နားလည်ကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မဗေဒါနှင့် စင်္ကာပူရောက်အလွဲများကို အားပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပိုစ့်လေးကတော့ အလွဲအဖြစ်အပျက်လေးကတိုပေမဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ သူတွေအကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်လို ဖတ်ကောင်းမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကာယကံရှင်တွေက ဖတ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်ကိုပြောတာ ဖြစ်ရမယ်လို့ ဒေါမပွပဲ၊ ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်အကြောင်းလို့သာ သတ်မှတ်ပြီး ရယ်ပြုံးကြပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။ မဟုတ်ရင် ကိုယ်က ဒီလိုပါဆိုတာ ဝန်ခံပြီးသွားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။ :P ဒီတစ်ခေါက်အလွဲပိုစ့်လေးကိုရော ဘယ်လိုမြင်လဲ? သင်တို့ ကြုံခဲ့တဲ့ Flatmates လေးတွေအကြောင်းလဲ ပြောပြသွားကြလေ။
Posted by mabaydar at 8:03 PM
��this post made me miss my ex house mate ������
1/06/2016 12:38 AM
ျဖဴျဖဴၾကီးက လန္႕စရာဟယ္... ျပီးေတာ့ တီဗြီကိုျပဴးၾကည့္ေနတဲ့မေဗဒါနဲ႕ ဖ်ာဝင္ခင္းဖို႕ေစာင့္ေနတဲ့ေဘးကတေယာက္ကိုျမင္ေယာင္ျပီး ရယ္လိုက္ရတာ... 😂
1/06/2016 8:05 AM
Khine Khine Zaw said...
အခန္းေဖာ္ကလည္း အိပ္ခ်ိန္ကလြဲ ျပန္မလာ.. အိမ္သူႀကီးအစ္မကလည္း သေဘာေကာင္း ခုထိေတာ့ ကံေကာင္းေနေသး ဘာမွ ျပသနာမရွိေသး .. :D :D
1/06/2016 8:16 AM
minami pandaho said...
ညီမ လဲ ဒီနွစ္​ထဲမွာ SG မွာ​ေက်ာင္​းတက္​ဖို႔
စိတ္​ကူးထားတာပါ..အဲ အဲ့ဒီ့ အခန္​းျပသနာက
သိပ္​ flexible မျဖစ္​တတ္​တဲ့အထဲပါ​ေတာ့ကိုယ္​နဲ႔
ခ်င္​း​ေတြကိုလဲ​အခက္​အခဲ​ေတြေမးၾကည္​့ ဘာၾကည္​့နဲ႔ ..အခု ဒီ post ​ေလးျမင္​​ေတာ့ ​ေပ်ာ္​
သြားတယ္​ ​ေၾသာ္​အခန္​း share ရတယ္​ဆိုတာ
@Ma Ma Ei Ei - So did you like your flatmates? Was there any problems you guys encountered?
@သန္႔စိန္ ေရ... ေနတတ္မွ နားသက္သာမယ္။ မဟုတ္ရင္ လာေတာ့မွာ သိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကာယကံရွင္က သူ႔ကိုယ္သူလဲ သတိထားမိပံု မေပၚဘူး။
1/06/2016 9:57 AM
@Khine Khine Zaw - ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္လုပ္ေပးစရာရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ေပးေနာ္။ သေဘာေကာင္းတယ္ဆိုျပီး ကိုယ္က မလုပ္ေပးျဖစ္ရင္ သူခ်ည္းလုပ္ေပးေနေတာ့ တစ္ေန႔ ေျပာစရာျဖစ္ေနအံုးမယ္။ အားလံုးက အေပးအယူမွ်မွ...
@minami pandaho - ညီမေရ... ပိုစ့္ထဲမွာေျပာခဲ့သလိုပဲ တစိမ္းနဲ႔ ေနရတာ ကိုယ့္မိသားစုလိုေတာ့ ဟုတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အစစသတိရွိရသလို အလိုက္လဲသိရတယ္။ အဲ... ဒါေပမဲ့ ကိုယ္က အလိုက္သိေနျပီး သူတို႔က မသိရင္လဲ ကိုယ္ခ်ည္းလုပ္ေနရလိမ့္မယ္။ တခါတေလလဲ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ အထွာသိသိ စကားေျပာတတ္ရေသးတယ္။ သန္႔ရွင္းေရး၊ အိမ္မွဳကိစၥကအစ ကိုယ္ခ်ည္းလုပ္ရတာ။ ဥပမာ... အ၀တ္ေလ််ာ္စက္ေလွ်ာ္ျပီးရင္ အ၀တ္ေတြကို ေလွ်ာ္စက္ထဲထားျပီး ခ်က္ခ်င္းမလွန္းရင္ ေနာက္လူေလ််ာ္လို႔မရတာတို႔ဘာတို႔ေပါ့။ ေနာက္ရွိေသးတယ္... ကိုယ့္အ၀တ္ေတြက ေျခာက္ေနျပီး ခ်က္ခ်င္းမရုပ္ေတာ့ သူမ်ားလွမ္းစရာေနရာမရွိတာျဖစ္တတ္သလို၊တျခားသူေတြ ဟင္းခ်က္ရင္ ကိုယ့္အ၀တ္ေတြ ဟင္းႏွံ႔ေတြ စြဲကုန္တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ အဲ့ဒါမ်ိဳးက်ေတာ့ ဘယ္သူ႔မွ အျပစ္တင္လို႔မရဘူးေလ။ တခ်ိဳ႕ အခ်င္းခ်င္း နားလည္တဲ့ အခန္းေဖာ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ ဟင္းမခ်က္ခင္ ကိုယ့္အကၤ်ီေတြ ရုပ္ေပးထားတာတို႔ ဘာတို႔ လုပ္ေပးတယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳးအခန္းေဖာ္ဆိုရင္ေတာ့ ကံေကာင္းေသးတာေပါ့။ ဒါေတာင္ တျခားေနရာမွာ ေဖာက္ရင္ေဖာက္ေနမွာ ဥပမာ ကိုယ္က အိပ္ခ်င္ေနျပီး သူက အခန္းထဲမွာ မိုးခ်ဳပ္ထိ မီးဖြင့္ေနတာတို႔ဘာတို႔ေပါ့။ အမ်ားၾကီး စိတ္ကို ျပင္ဆင္လာဖို႔ပဲ မွာခ်င္တယ္။
အရင္တုန္းကသိပ္ေပ်ာ္ဖုိ႔ေကာင္းတဲ႔အိမ္တစ္အိမ္မွာေနဖူးတယ္..အပ်ိဴၾကီးေတြနဲ႔ေလ..။ ညီမက အဲတုန္းကေတာ႔ အပ်ိဳေပါက္စာရင္း၀င္ေပါ႔ :P အခုေတာ႔အပ်ိဳၾကီးစာရင္း၀င္ေနပါၿပီ..။ ဆက္ေျပာရရင္ သိပ္ေပ်ာ္စရာေကာင္းတာ ကိုယ္က အငယ္ဆံုး .. တစ္ေယာက္တည္းသမားထံုးစံတအားအပ်င္းထူတယ္ စေနတနဂၤေႏြဆုိရင္..ေခါက္ဆြဲျပဳတ္စားၿပီးအိပ္၇ာထဲက မထဘူး...ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ၿပီးတစ္ခြက္ေဖ်ာ္ေသာက္ၿပီးအပ်င္းထူတဲ႔ ညီမကို .. မေနႏုိင္တဲ႔ အမေတြက ထမင္းေကြ်းၾကတယ္..။ အဲတုန္းက အမတစ္ေယာက္က ညီမဘေလာက္ကို ခဏခဏ၀င္ဖတ္ျဖစ္တယ္တဲ႔ အခ်င္းခ်င္းလည္းမသိဘူး ။ ေနာက္ေတာ႔မွ ဘေလာ႔ေရးတယ္ဆုိေတာ႔မွ စကားစပ္ၿပီး ညီမဘေလာ႔ကိုဖတ္တဲ႔သူျဖစ္ေနတာ း)...။ ခုေတာ႔ အဲအမေတြလည္းအိမ္ေထာင္ေတြကိုယ္စီက်ၿပီးေတာ႔... တစ္ေယာက္တစ္ေနရာစီျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ..။ ဘာသာမတူတဲ႔ အမတစ္ေယာက္လည္းရွိေသးတယ္ ။ ခုထိခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ပဲ ။ တျ့ခားအိမ္ေတြက အခန္းေဖာ္ေတြနဲ႔ေတာ႔ ေမးထူးေခၚေျပာေလာက္ပဲ ။ မွတ္မွတ္ရရတစ္ခုရွိေသးတယ္...အေကာင္းေတာ႔မဟုတ္ပါဘူး ။ အဲတုန္းက ညီမက ခ်စ္သူရစဆုိေတာ႔ ဖုန္းေလဒီျဖစ္ေနတာ အခန္းေဖာ္အသစ္ အမက.. (သူက အသစ္ ညီမကေနတာၾကာၿပီ) ညီမကို ဘဲနဲ႔တခ်ိန္လံုးဖုန္းေျပာလိုက္ ခ်တ္လိုက္လုပ္ေနတယ္ သူ႕ကိုအဖက္မလုပ္ဘူး သူက ၀ိုင္ေသာက္ဖုိ႔ေခၚတာ မေသာက္တတ္ဖူးေျပာလို႔ စိတ္ေတြဆိုးၿပီး ျပသနာတက္ေသးတယ္..။ တရားခံက သူ႕ကိုဂရုမစိုက္လို႔တဲ႔..ေနာက္ေတာ႔သူလည္းေျပာင္းသြားတယ္..။ ညီမေတာ႔ အဲဒီအိမ္မွာေတာ္ေတာ္ၾကာလိုက္ေသးတယ္..ေနာက္မွ ခု လက္ရွိေနရာကိုထပ္ေျပာင္းျဖစ္တာ..။ ေလာေလာဆယ္အိမ္ကေတာ႔ ေနတာလည္းၾကာၿပီ အခန္းေဖာ္ကလည္းသူငယ္ခ်င္းဆိုေတာ႔ အဆင္ေျပတယ္ေပါ႔ေနာ္..။ ေနာက္မ်ားေတာ႔ တစ္ေယာက္တည္းေနဖို႔ပဲစိတ္ကူးရွိတယ္..။ ဘယ္ေလာက္ခင္ခင္ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ခ်စ္..တစ္ေယာက္တည္းေနတာေလာက္ေတာ႔ မလြတ္လပ္ဘူးေလ း)
1/06/2016 11:36 AM
တို႔ၾကံဳဖူးတာနဲ႔ မေဗဒါ ေနာက္ဆံုးေရးထားတာနဲ႔ ကြက္စတိပဲ.. သူ႔ရဲ႔ရံုးအလုပ္ကို မနက္ ၄ နာရီအထိ အခန္းမီးဖြင့္လုပ္တဲ႔ အခန္းေဖာ္နဲ႔ ၾကံဳဖူးတယ္. သူကေတာ့ မနက္ကို ၈ နာရီေလာက္မွ ထျပီး အလုပ္သြားရတာ ကုိယ္က မနက္ ၆ နာရီဆိုထၿပီး ျပင္ဆင္တာေတာင္ မီးမဖြင့္ပဲ မီးဖိုေခ်ာင္က ေဘစင္မွာပဲ ဖီးလိမ္းတယ္။
သမီးေရ တကယ္ဖတ္လို႔ ေကာင္းတဲ႔ ပို႕စ္ ေလးပါ။ အမ်ားနဲ႔ ေနရင္ ဒါမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ ကို ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္ရေအာင္ ေရးတတ္လိုက္တာ။ ေနာင္လဲ ဒီ႔ထက္ပိုျပီး ဗဟုသုတ ရမဲ႔ ပို႕စ္မ်ား ဖတ္ခ်င္ပါေသးတယ္ သမီးေရ
1/06/2016 11:46 AM
Nint Gyi Daw said...
The rubbish story makes me laugh! People can be so serious on little things if they persist.
1/06/2016 8:06 PM
Did anyone bite you? 9
1/06/2016 9:06 PM
It made me think about what other people would think about me and what they would write about me.
What do you think people would write qbiut you Mabaydar?
ဒီပိုစ္ကို ခုမွ ဖတ္မိတယ္။ မေဗဒါ ေျပာတဲ့ အေျခာက္မကို ကိုယ္လဲသိသလိုပဲ။ flatmate(အခန္းေဖာ္ မဟုတ္) တေယာက္ရဲ့ သူငယ္ခ်င္းပါ။ ကိုယ္တို႕ ေနတဲ့ အိမ္လဲ ဝင္ထြက္ ဖူးတယ္။ ဟုတ္တယ္။ ေယာက္က်ားေလး နဲ႕ လုံးဝ မတူသလို အေျခာက္နဲ႕လဲ လုံးဝ မတူဘူး။ အဲ့ဒီ flatmate က လဲ ေျပာတယ္။ သူလဲ အစက မသိဘူးတဲ့။ အဲ့ အေျခာက္မ နဲ႕ Bra ေတြ ဘာေတြ (၂ ထည္ ဘယ္ေလာက္) ဆိုျပီး ေစ်းခ်ရင္ တေယာက္တထည္ ေတာင္ စပ္ဝယ္ ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုပဲ။ ေနာက္မွ သူမ်ားေတြက ဟဲ့ အဲ့ဒါ အေျခာက္ဆိုမွ "ဟမ္ ဟုတ္လား" လို႕ ေတာ္ေတာ္ေတာင္ လန္႕သြားတယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီ အေၾကာင္းသိသြားျပီး ေနာက္ပိုင္းလဲ အေျခာက္မနဲ႕ သူနဲ႕က ဆက္ခင္တုန္းပဲတဲ့။
မေဗဒါ post ဖတ္ျပီး ေက်ာင္းတုန္းက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ တူတူေနခဲ့တာ သတိရလိုက္တာ။ သတိ အရဆုံးက ထိုင္ဝမ္ F4 ကား (meteor garden) ကို series လိုက္ဝယ္ျပီး ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ထိုင္ၾကည့္ေနတာ ကိုယ့္ရဲ့ အခန္းေဖာ္နဲ႕ flatmate ေတြကပါ လိုက္ၾကည့္ျပီး ဟိုေမး ဒီေမး နဲ႕ ေနာက္ဆုံး series တခုလုံးကို ဘာသာျပန္ေျပာေပးခဲ့ ရတာ အလြမ္းဆုံးပဲ။ အဲ့ အာေတြလဲ ေျခာက္ ေရေတြလဲ ငတ္။ တအိမ္လုံးမွာ ကိုယ္တေယာက္ထဲ တရုတ္လို တတ္တာကိုး။ သူတို႕က ရုပ္ရွင္ကိုၾကိဳက္၊ မင္းသားေတြကိုလဲ ၾကိဳက္။ ကိုယ့္ကို အတင္းေမး။ For Example : ဟယ္။ ေျပာျပ ပါဟယ္။ အဲ့ဒီ လိပ္က ဘာေျပာလိုက္တာလဲဟင္။ အေမေက်ာ့ ကေရာ ဘာေျပာတာလဲ။ ေသာက္ေရစစ္ က ဘာေျပာတာလဲ။ ဆီးမွန္ ကေရာ ဘာေျပာသလဲ။
လိပ္ = ေလ့ (ဟြားက်ယ္ေလ့)
ေသာက္ေရစစ္ = ေသာက္မိန္စြတ္
အေမေက်ာ့ = ေမေက်ာ့
ဆီးမွန္ = စီးမန္
ကိုယ့္မွာ ရုပ္ရွင္ကို တဖက္ကၾကည့္ရ။ သူတို႕ကို တဖက္က ဘာသာျပန္ေပးရ။ ေမာတာ။ ဒါေပမဲ့ ေပ်ာ္တယ္။ ဟီးဟီး။
1/07/2016 12:42 AM
TV ေစာင့္နတ္မင္း ဆိုတာကိုသေဘာက်တယ္
1/08/2016 4:14 PM
@ဆုျမတ္မိုး - အားလံုးနဲ႔ အဆင္ေျပတယ္ဆိုေတာ့ ကံေကာင္းတာေပါ့။ ညီမကလဲ နားလည္မွဳရွိ အတူေနတဲ့သူေတြကလဲ နားလည္မွဳရွိလို႔ ၂ဦး၂ဘက္လံုး ေကာင္းလို႔ အဆင္ေျပတာ။ ဟုတ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ရင္းႏွီး ရင္းႏွီး တစ္ေယာက္တည္းေနတာေလာက္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေလ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္တည္းက်ျပန္ေတာ့လဲ အခန္းခက ေထာင္းတာ ထည့္စဥ္းစားရမယ္။
@TZN - ဟုတ္တယ္။ ဒါေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကံဳေနက် ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆနာေတြခ်ည္းပဲေလ။ က်န္တာေတြ ရွိေသးတယ္။ သီခ်င္းအက်ယ္ၾကီးဖြင့္တာ။ ကိုယ္ရွိေနတာေတာင္ မရွက္ ရည္းစားနဲ႔ တစ္ညလံုး ဖုန္းက်ဴတာ။ စားျပီး ပန္းကန္မေဆးတာ။ အေပါ့သြားျပီး ေရမဆြဲခ်တာ။ စသည္ျဖင့္ အမ်ားၾကီးေပါ့။ ဒီလိုပဲ သည္းခံညွိ ႏွိဳင္းေနရမွာေပါ့။ မခံႏုိင္ေတာ့ရင္ေတာ့ အေျခအေနေပးရင္ ေျပာင္းေပါ့။
@Wai Wai Htun - အျမဲလာျပီး အားေပးတတ္တဲ့၊ ဘေလာ့ပိုစ့္ေအာက္မွာ ကြန္မန္႔ေရးရတာ သိပ္အဆင္မေျပေပမဲ့ အခ်ိန္ယူျပီး ခုလို အားေဆးေကြ်းလို႔ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။ ဗဟုသုတရတယ္ဆိုလို ၀မ္းသာပါတယ္။ ကိုယ့္အေတြ႔အၾကံဳေလးေတြ ေ၀မွ်တာပါ။
@Nint Gyi Daw - yes... အမွဳိက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္ ဆိုတာေလ။ The problem might be small, but when it is accumulate for long term, it can be big problem.
@William - Nobody gets hurt in the story. :P
To be honest, It is not very important for me that what other people might think about me. Especially, negatively. If I keep hearing about my bad habits or many people behaving strange towards me for specific situation then of course I will analyse myself then If I need to change, I will change.
But if only one or two persons talk bad about me just bcoz they didn't get their way with me or they hate me for some reasons, I wouldn't giveadamn about that. How constructive their criticism for me is? What is so important about their criticism in my life? How important they are in my life? Not worth it right?
So you do cares about how people will view you and stay according to their criticism?
@Shin - ရွင္းသိတဲ့ အေျခာက္မ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ထင္တယ္။ ေက်ာင္းတူတယ္ဆိုေတာ့ေလ။ ကိုယ္ကေတာ့ သူ႔ကို သိတဲ့အခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသား မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အိမ္မွာ အတူေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ္လဲ ထိုင္၀မ္ F4 သိပ္ၾကိဳက္တာ သိတယ္ဟုတ္။ ကိုယ့္တုန္းကေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ၾကည့္တာ ဘာစာတမ္းထိုးမွ မပါဘူး။ အဲ့ဒါကို နားလည္ခ်င္ေတာ့ ရုပ္ရွင္ထဲက သူတို႔ေျပာတဲ့ အသံေတြကို မွတ္။ ၁၈လမ္းက ေခြဆိုင္က ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္း ရွမ္းတရုတ္မေတြကို ေခြသြားအပ္တိုင္း ေမး။ ဒီလိုနဲ႔ တရုတ္စကားေတာင္ နည္းနည္းတတ္သြားတယ္။ အဲ့လို မေလ်ာ့ေသာဇြဲ။
@SSS - ေနာက္ဆက္တြဲအပိုင္းေတြက အလြဲေတြ ထပ္ျဖစ္ရင္ ျဖစ္ေစ၊ စဥ္းစားမိတာရွိရင္ျဖစ္ေစ ေရးေပးမယ္ေနာ္။ TV ေစာင့္နတ္မင္းရာထူးကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္တာ။ ခုဆိုရင္ေတာ့ တီဗြီမေစာင့္ေတာ့ဘူး အင္တာနက္ကၾကည့္တာဆိုေတာ့ အင္တာနက္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ေနျပီ။ ကြန္မန္႔အတြက္ ေက်းဇူးေနာ္။
1/13/2016 3:51 PM
သင်မသိသေးတဲ့ “Cheese in the Trap” က မင်းသား Park H...